London School of Economics - Study in United Kingdom
gaabinta : LSE
aasaasay : 1895
Ha iloobin in aad wada hadlaan School London Dhaqaalaha
Qor at School London Dhaqaalaha
LSE waa hay'adda horseedka bulshada sayniska adduunka, iyadoo dad badan oo ka mid ah khubarada adduunka ee hoggaameed beerahooda, iyo jarida cilmi ku laayeen.
Dugsiga waxay bixisaa koorsooyin ma aha oo kaliya in dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda, laakiin sidoo kale in tiro balaadhan oo ah maadooyinka cilmiga bulshada, baray gudahood 19 waaxyaha iyo tiro ka mid ah machadyada maadooyinka.
Barnaamijyada shahaadada shahaadada hoose:
(BSc / BA / LLB) – saddex sano ama afar-sano barnaamijyada-degree ugu horeysay ee kala duwan ee maadooyinka, bixiya tababarka waxtar aqooneed ee habab kala duwan si ay su'aalo bulshada.
Barnaamijyada shahaadada Graduate:
baray: (Diploma / MSc / MA / MPA / LLM) - Barnaamijyada hal ama laba sanno. Qaar badan oo waayo-aragnimo wax ku ool ah boorish la falanqayn tacliimeed oo adag si ay u ballaariyaan aqoonta dhakhaatiirta ee beeraha gaar ah.
Research: (Mphil / MRes / PhD) – Barnaamijyada saara saynisyahano bulshada xirfadeed, yaqaanada kala duwan oo ka mid ah farsamooyinka cilmiga bulshada iyo hababka, aqoonta iyo qoto-dheer oo ah meel gaar ah.
University of Barnaamijyada International London:
(barnaamijyada / Diploma BSc) – waxbarasho iyada oo loo marayo waxbarashada masaafada, gargaarka ee Hanuuniyaa mawduuca iyo qalabka kale ee ay bixiyaan LSE.
Ardayda ka soo adduunka oo dhan ayaa la soo dhaweeyay at LSE tan iyo aasaaskii School ee 1895. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira in ka badan 150 wadan on campus, samaynta LSE jaamacad gaar ah oo caalami ah iyo magalo. LSE siinayaa fursad ay ku bartaan cilmiga bulshada ka eegaya dhinaca runta ah ee caalamka, hareereysan bulshada ah oo gebi ahaanba caalamiga ah.
Sida arday undergraduate caalamiga ah, waxaa laguu ballan qaaday hoyga ka mid ah LSE ama a University of London Hall of deganaanshaha, shardi ah waxaad codsan kama danbaysta ah ee 31 Laga yaabaa. Nasiib darro ma damaanad qaadi karno meel arday kasta graduate, inkastoo meelaha laga heli karaa hoolasha LSE iyo hoolalka intercollegiate.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ka heli karto war dheeraad ah oo ku saabsan LSE. Sannad kasta waxaan qaban laba maalmood Open undergraduate. In 2016 kuwaas oo lagu qaban doono April iyo July.
Haddii kale, aad biiri karaan safar campus ah, ama qaataan is hanuuniyey adiga kuu gaar ah safar, iyo shaqaalaha ka badan ku faraxsan yihiin inay ka jawaabaan wixii su'aalo aad qabto waa – si fudud u joojin by Suuq Ardayga iyo shaqo-qorista (6Floor th, Tower One).
Haddii aad ma ka dhigi kartaa noogu in qofka, waxaad ka arki kartaa Study at videos LSE, akhri mid ka mid ah qorayaasha ardayda, email alum ama la kulmo mid ka mid ah wakiilada marka ay wajahayaan degaankaaga.
Department of Accounting Department of Media iyo Isgaarsiinta
Department of Anthropology Department of Tabaha
Department of History Dhaqaalaha Department of Philosophy, Logic iyo Habka Sayniska
Department of Economics Department of Psychological Science iyo Dabeecadda
Department of Juqraafiga iyo Deegaanka Department of Sociology
Department of Dowladda Department of Statistics
Waaxda Horumarinta Caalamiga ah Machadka Yurub
Department of History International Machadka Gender
Waaxda Xiriirka Caalamiga ah International sinaan Institute
Department of Management Language Center
Department of Mathematics Institute for Marshall philanthropy iyo Social Ganacsi
School London ee dhaqaalaha waxaa la aasaasay bishii 1895 by Beatrice iyo Sidney Webb, markii hore ay maal dardaaranka ah £ 20,000 ka estate ee Henry Hunt Hutchinson. Hutchinson, qareen iyo xubin ka mid ah Society Fabian ah, lacagta ee trust tagay, in la “dhinaca horumarinta waxyaabaha ay sinaba uga muuqda talinayaa”. Shanta wakiillo ahaayeen Sidney Webb, Edward Pease, Constance Hutchinson, William de Mattos iyo William Clark.
LSE Qori in soo jeedinta in la dhiso dugsiga lagu uuraysan intii lagu jiray kulan quraac on a 4 August 1894, dhexeeya Webbs ah,Graham Wallas iyo George Bernard Shaw. Soo jeedinta la aqbalay by hayaasha ee February 1895 iyo LSE qabtay fasalada ugu horeeyay ee October ee sanadkan in, qolalka at 9 John Street, Adelphi, ee City of Westminster.
School ayaa ku biiray Jaamacadda Federaalka London ee 1900, noqday jaamacadda ee Kuliyada Dhaqaalaha iyo darto darajo of University ka 1902. Ballaarinta si degdeg ah muddo sannado ah ka dib, dugsiga hore u dhaqaaqay dhow ee 10 Adelphi Terrace, ka dibna si Market Clare iyo Houghton Street. Dhagaxii aasaaskii Old Dhismaha, on Houghton Street, la dhigay by King George V ee 1920; dhismaha la furay 1922.
The 1930 dood dhaqaale u dhexeeya LSE iyo Cambridge waxaa si fiican u yaqaan in wareegyada tacliimeed. Xafiiltanka u dhexeeya opinion tacliimeed ee LSE iyo Cambridge dib u dhaco si xididada dugsiga markii ay LSE ee Edwin Cannan (1861-1935), Professor Dhaqaalaha, iyo Cambridge ee Professor Dhaqaalaha Siyaasadda, Alfred Marshall (1842-1924), dhaqaaleyahan ugu horeeysa ee maalintii, dooday arrinta ku saabsan wadnaha daafaca ee dhaqaalaha iyo in mawduuca waa in la tixgeliyaa oo dhan ah organic. (Marshall nacay ee LSE ee liiska gooni ah oo aragti saafi ah oo ay ku adkeysaneyso on taariikhda dhaqaale.)
Khilaafkan ayaa sidoo kale ka walaacsan su'aasha ah ee door ah dhaqaaleyahan ee, iyo in this waa in sida khabiir ku ah go'ay ama lataliye ku ool ah. qareennada iyo dhaqaaleyahannada LSE iyo Cambridge wadajir shaqeeyay ee 1920-tusaale ahaan, ee London iyo Service-laakiin dhaqaalaha Cambridge 1930 keenay khilaafka soo laabto sida LSE iyo Cambridge ku dooday in ka badan xal u ah niyad-jabka dhaqaale.
LSE ee Lionel Robbins oo Friedrich Hayek, iyo Cambridge ee John Maynard Keynes ahaayeen tirooyin sare ee khilaafka u dhexeeya hay'adaha caqliga. muranku ka ballaarisey ka sicir-jab kasoo horjeeddo maamulka baahida sidii xal u ah dhibaatooyinka dhaqaale ee maalintii, si ay u fahmaan ballaaran ee dhaqaalaha iyo macroeconomics. Robbins oo Hayek ee views ayaa ku salaysan School Austria ee dhaqaalaha ay xoogga ganacsiga xorta ah iyo anti-interventionism, halka Keynes hormartay brand ah oo aragti dhaqaale oo hadda loo yaqaan Keynesianism oo u dooda jawaabaha siyaasad firfircoon ay qaybta dadweynuhu.
Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, Dugsiga decamped ka London u University of Cambridge, degan dhismayaasha ay leeyihiin Peterhouse.
hubka The School ee, oo ay ku jiraan ay ku dhiga iyo oorso yar oo xeeb ku nool iyo Ooyintii, ayaa la ansixiyay bishii February 1922, uu soo jeediyo guddiga ka mid ah laba iyo toban, oo ay ku jiraan sideed ardayda, kaas oo la aasaasay si ay baaritaan arrinta. dhiga The Latin, “Si aad u ogaato sababaha”, waxa laga soo qaatay Virgil ee Georgics. Its Tarjamada Afka waa “Inaad Ogaato ku Sababaha Waxyaabaha”oo taas waxaa loo soo jeediyay by Professor Edwin Cannan. Ooyintii oorso yar oo xeeb ku nool ayaa waxaa lagu soo xulay ururada ay la “beegtay, constructiveness iyo dhaqanka u shaqeeya”.
ka hadlayay in 2001 ku saabsan xaaladda iyo dhicidda ka LSE ee, majaladda British The Economist ayaa sheegay in “laba sano ka hor LSE weli la xiriirta miskiinka ah University of kulliyadaha kale ee London. Hadda… waxaa si joogto ah u socota Oxford iyo Cambridge ee miisaska horyaalka ee wax soo saarka cilmi-baarista iyo tayada baridda iyo waa ugu yaraan sida dibadda si fiican u yaqaan sida Oxbridge”. Sida laga soo xigtay majaladda, Dugsiga “ku leedahay guulaha ay gaadheen in ay hal-ku fikirno, dhiig-miirashada-style American ah magaca iyo xiriir siyaasadeed ay agaasimayaasha dhawaan, gaar ahaan Mr Giddensand isaga ka horeeyay, John Ashworth”, iyo lacag ka ardayda shisheeyaha kicisaa’ ujrada sare, kuwaas oo soo jiidatay by xiddigaha tacliimeed sida asRichard Sennett.
Recently, Dugsiga ayaa si firfircoon uga soo horjeeda soo jeedin Dowladda Ingiriiska inay soo bandhigto kaarka aqoonsiga khasabka ah, cilmi baarista gelin kharashka la xidhiidha ee nidaamka, iyo wareegaayo ra'yiga dadweynaha iyo dawladda arrinta. hay'adda ayaa sidoo kale caan ah oo leh siyaasiyiin iyo xildhibaan ay u bilowdo siyaasad cusub, sharciga iyo manifesto ballan-, si cad oo la daah-Shirka Bayaanka Liberal Democrats hoostiisa Nick Clegg on 12 January 2008.
In ka 2010s hore, aqoonyahano ay ku jirtay safka hore ee labada-talin dowladda qaran iyo heer caalami, dib u eegista iyo siyaasadda, oo ay ku jiraan wakiil on Guddiga Garoomada UK, Komishanka Madaxa-bannaan ee Booliska, Guddiga La-talinta Socdaalka, Guddiga La-talinta ee Qaramada Midoobay on Biyaha iyo Fayadhowrka,Guddiga Maaliyadda London, HS2 Limited, Guddiga Kaabayaasha dawladda UK ee iyo caqlicelin on Architecture iyo Magaaleynta for London 2012 Olympics
Waxaa kaalinta afar jaamacadaha ugu wanaagsan caalamka ugu sareysa sida loo shaqeeyayaasha shanta sano ee la soo dhaafay. Inta badan ardayda LSE ku hawlan yihiin shaqo ama waxbarasho dheeraad ah lix bilood oo ka qalin gudaha iyo School ugu horeysay waxaa ku qoran shaqo ee 2012 Sunday Times Good University Guide. The qaybaha ugu badan ee ka qalin LSE in ay ka shaqeeyaan in lix bilood gudahood ka qalin waxaa xisaabtaaysa, maaliyadda iyo xisaabaad; horumarinta, NGO-yada iyo ururada caalamiga ah; latalin; waxbarashada; iyo dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ah. Intaa waxaa dheer, mushaharka bilaabo celcelis ahaan ka qalin-kii ayaa dhameystirtay undergraduate iyo qalin degrees labadaba la LSE waa weyn u ka badan yahay mushaharka guud ee qaranka celcelis ahaan la £ 28.100 (undergraduate) iyo £ 35.400 (qalin).
Craig Calhoun kor u qaadeen post ee Agaasimaha bishii September 2012. Its Agaasimaha hore, Judith Rees, sidoo kale waa guddoomiyaha Grantham Institute ee dugsiga on Climate Change, taliye Bankiga Aduunka iyo sidoo kale on Guddiga La-talinta ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay fadhiya on Biyaha iyo Fayadhowrka iyo Golaha Caalamiga ah ee La-talinta Sayniska (Isaaq). Waxa kale oo ay sheegtay in uu yahay Convenor hore ee Department of Juqraafiga iyo Deegaanka, oo waxay u adeegeen sidii Agaasime Ku-xigeenka ka 1998-2004.
In 2013, Grimshaw International Relations Society ah, mid ka mid ah ururada ugu da'da weyn oo ugu qiimaha ardayga on campus, lagu qabtay ilowsiin ah ka gaartay BBC Panoramadocumentary a on North Korea, duubay gudaha Itobiya cadaadis, kaas oo la xayirayo by saraakiisha Ki heer sare ah. The 'safarka edutainment’ keena dareenka warbaahinta caalamiga ah, sida wariye BBC a waxaa iska dhigaya professor ka LSE covertly.There ahayd dood sida meesha this gelin nolosha ardayga ee biimeeyey in Itobiya cadaadis haddii wariye la bandhigi. Dowladda Kuuriyada Waqooyi dhigay hanjabaado colaad dhinaca ardayda iyo LSE, ka dib markii sumcad ah, taas oo lagu qasbay raaligelin ka BBC.
Ma rabtaa wada hadlaan School London Dhaqaalaha ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: London School of Economics rasmiga ah Facebook
London School of Economics dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of School London Dhaqaalaha.
King ayaa College London London